Iwo akanakisa mafomu ekutarisa kurara kwako uye kuzorora zvirinani | Ndinobva mac
Iwo akanakisa mafomu ekutarisa kurara kwako uye kuzorora zvirinani
Munhu wese tinoda kurara nekuzorora, uye kunyangwe maawa masere ekurara pazuva achikurudzirwa, ichokwadi kuti munhu wega wega, zvakare zvichienderana nebasa ravo, vangangoda kurara kushoma. Zvisinei, kunyangwe paine huwandu hwemaawa atinorara zuva rega rega, chinonyanya kukosha kuzorora zvakanaka nekuti hapana mukana wekurara kwemaawa mazhinji kana tikamuka tisina kana mutsindo, taneta, nemaronda emuviri, nezvimwe. Kana izvi zvikaitika kwatiri, kwete chete isu tichaita zvakanyanyisa kuipa mumabasa edu zuva iro, isu tichavawo mune yakashata manzwiro, kusuwa, uye kunyange kuendesa aya manzwiro kune avo vakatikomberedza.
Sezvauri kuona, kurara zvakanaka uye kuzorora chinhu chisinga gonekwe icho chiri kuongororwa nhasi. Kusadya zvinodhaka kana doro, kudzivisa zvakawandisa zvakadai sekofi, tii kana zvinwiwa zvine simba, pamwe nekugara uchishanda mukati mezuva, ndidzo dzimwe kiyi dzekurara zvirinani. Asi pasina izvi zvese, haugone kuzorora sezvaunofanira, pamwe chimwe cheanotevera maapplication ekuongorora kurara kwako kukubatsira kuti uvandudze zvishoma nezvishoma.
1 Wangu Akakodzera
3 Kurara ++
4 Kurara Pulse 2 Motion
Kunyangwe isu tiri paApple-themed blog, isu tichaenda kutanga neimwe yemakwikwi emakwenzi, Xiaomi. Kune avo vanoda kuongorora kurara kwavo uye kuongorora muyero wavo wekuzorora vasina kushandisa mari yakawandisa, ini ndinokurudzira iyo Mi Band 2 quantifying bracelet uye iyo Mi Fit iPhone application.
Pamutengo wepakati pe25 kana makumi matatu euros, iwe uchave unokwanisa kunyatso tarisa kuhope kwako, tarisa maawa ako ekurara zvakadzama uye hope dzakareruka husiku hwega hwega, ona kubva panguva ipi kusvika panguva ipi yawakarara, uye kunyange kuona mu graph mafambiro ekurara kwako awa neawa neusiku nehusiku. Izvi Izvo zvinokubatsira iwe kusiya zvakaipa tsika kumashure paunoona kuti iwe unorara zvirinani uye uchizorora zvakawanda.
Mubhedha uye iyo Kurara Monitor, ichangobva kuwanikwa neApple, ndeimwe yemidziyo uye maapplication ekuteedzera zvakakwana kurara kwako. Iyi kambani ine yekurara yekutarisa inonzi Mubhedha 3 iyo inogona kuwanikwa kuApple pamutengo we149,95 euros.
Sezvauri kuona mumufananidzo, inoumbwa ne tetepa uye inoshanduka inonzwa iyo inoiswa pakati peshiti nemetiresi, pasi pepiro, uye inounganidza data rese rine chekuita nekurara kwedu, tichiriongorora uye tichitumira kune iro iPhone application.
Kuongororwa kweiyi data kunoitwa kubva musainzi musimboti we ballistocardiography (BCG), iyo inoyera mashandiro emuchina emapapu, moyo, kuridza ngonono, kufamba, zvichingodaro.
Kana iwe uine Apple Watch, ine Kurara ++ hauzodi chimwe chinhu chekutarisa kurara kwako. Sezvandaiva nazvo nemidziyo yapfuura, Kurara ++ kunorekodha nguva dzedu dzekurara zvakadzama uye kurara zvishoma zvichienderana nekufamba kwedu tichishandisa accelerometer ye  Tarisa. Uye zvakare, iwe paunongomuka, iyo app inokuratidza iyo ruzivo uye ichafananidza iyo data nehutano kana neapp yaunoshandisa kuburikidza neHealthKit.
Sezvaungave iwe watofungidzira, chakashata ndechekuti iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unewachi inobhadhariswa nebhatiri, uye unofanirwa kumbomira kuchiraja kune imwe nguva isiri iyo husiku.
Kurara Pulse 2 Motion
Ichi chikumbiro chakafanana neicho chekare, asi nemutengo we € 4,49. Kurara Pulse 2 Motion inogadzira kuteedzera kurova kwemoyo wako kuburikidza neApple Watch sensors nekufamba kwako panguva yehusiku uye ongorora zvabuda kukuratidza kuongororwa kwakadzama mangwanani oga oga iyo iwe yaunogona kushandisa kutarisa kana matanho awakatora ari kunyatso kukubatsira iwe kurara zvirinani.
Nomuzvarirwo, uyu muenzaniso mudiki kwazvo we zvishandiso uye zvinoshandiswa zvinozotibatsira kurara zvirinani Kutenda kuongorora kwemaitiro edu ekurara, zvisinei, chokwadi ndechekuti kunyangwe zviite sei uye nekupedzisa izvi kana mamwe maapp, haatibatsire kana husiku hwese tikasarara matiresi yemhando yepamusoro iyo inotibvumidza isu kuzorora pamwe sezvatinokodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iwo akanakisa mafomu ekutarisa kurara kwako uye kuzorora zvirinani
Apple inotangisa yakanaka batch yeAirPod muFrance